Opel Android Car Dvd, Opel gam akporo 6.0 Car Dvd, Opel gam akporo 4.4 Car Dvdsupplier nke China
Nkọwa:Opel Android Car Dvd,Opel Android 4.4 Car Dvd,Opel Android 4.4 Car Dvd,Opel gam akporo 5.1 Car Dvd,,
Home > Ngwaahịa > Opel Android Car Dvd
Ngwaahịa nke Opel Android Car Dvd , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Opel Android Car Dvd , Opel Android 4.4 Car Dvd suppliers / factory, wholesale high-quality products of Opel Android 4.4 Car Dvd R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Autoradio maka VECTRA ANTARA ZAFIRA CORSA MERIVA ASTRA  Kpọtụrụ ugbu a
Ọnọdụ ụgbọ ala ANdroid9 maka Insigina 2009-2012  Kpọtụrụ ugbu a
Stereo ụgbọ ala gam akporo99 maka Astra J 2011-2014  Kpọtụrụ ugbu a
Stereo ụgbọ ala Android9 maka Astra J 2015-2017  Kpọtụrụ ugbu a
Andorid 9 ụzọ ụgbọ ala na-aga maka ASTRA K 2016-2017  Kpọtụrụ ugbu a
redio ụgbọ ala dị elu maka MOKKA 2017  Kpọtụrụ ugbu a
Na dash car mult sistemu igwe eji etinye Astra J  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiji ewu ewu android 9.0 dvd maka corsa  Kpọtụrụ ugbu a
Androidgbọ egwu android 9.0 ụgbọ ala Astra K 2016-2017  Kpọtụrụ ugbu a
Nreta ụgbọ ala 2019 dị elu maka Mokka 2017  Kpọtụrụ ugbu a
Insigina 2009-2012 android 9.0 audio audio  Kpọtụrụ ugbu a
Astra J 2011-2012 ụgbọ ala igwefoto dvd ọkpụkpọ ụgbọala  Kpọtụrụ ugbu a
Insigina 2009-2012 ụgbọ ihu DVD dvd player ihuenyo mmetụ aka  Kpọtụrụ ugbu a
Ejiji ejiji na stereo ụgbọ ala dash Astra J  Kpọtụrụ ugbu a
stereos ụgbọ ala na ọtụtụ mgbasa ozi maka CORSA 2015-2016  Kpọtụrụ ugbu a
onye egwu ụgbọ ala maka MOCCA 2012-2015  Kpọtụrụ ugbu a
usoro ntụrụndụ ụgbọ ala maka INSIGINA 2014-2015  Kpọtụrụ ugbu a
Opel Astra Corsa Zafira gam akporo 9 Headunit GPS  Kpọtụrụ ugbu a
AUTORADIO GPS ANDROID maka MOKKA 2017  Kpọtụrụ ugbu a
ụgbọ ala multimedia gam akporo maka Astra J 2011-2014  Kpọtụrụ ugbu a
nkeji redio isi ụgbọ ala maka MOKKA 2012-2015  Kpọtụrụ ugbu a
Autoradio maka VECTRA ANTARA ZAFIRA CORSA MERIVA ASTRA
Autoradio maka VECTRA ANTARA ZAFIRA CORSA MERIVA ASTRA Klyde Autoradio a maka VECTRA ANTARA na-akwado asụsụ dị iche iche, ihe ruru 70 asụsụ obodo. Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 OS nwere 4GB Ram, Octa-Core & 32GB ROM. You nwere ike megharịa akwụkwọ...
Ọnọdụ ụgbọ ala ANdroid9 maka Insigina 2009-2012
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Insigina 2009-2012 1) Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 sistemụ, ngwụcha ngwụcha Rockchip nke 4GB Ram, Octa Core & 32GB ROM, ọsọ ọsọ na-agba agba ọsọ ọsọ maka ngwa ndị na-agba ọsọ. 2) stereo ụgbọ ala maka Insigina...
Stereo ụgbọ ala gam akporo99 maka Astra J 2011-2014
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Astra J 2011-2014 Android 9.0 kachasị ọhụrụ, ị ga-enweta sistemụ arụmọrụ dị iche. A53 octa isi processor, melite ọsọ nzaghachi, igodo, egwu, vidiyo, ọsọ na-acha anụnụ anụnụ na-agba ọsọ 100%. Akụkụ Isi: 1) Kacha ọhụrụ...
Stereo ụgbọ ala Android9 maka Astra J 2015-2017
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka Astra J 2015-2017 1) Kacha ọhụrụ gam akporo 9.0 achịcha usoro, Rockchip processor nke nwere njedebe dị 4GB Ram, Octa Core & 32GB ROM, ngwa ngwa ngwa ngwa ọhụụ na-agba ọsọ maka ngwa ndị na-agba ọsọ. 2) redio ụgbọ...
Andorid 9 ụzọ ụgbọ ala na-aga maka ASTRA K 2016-2017
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka ASTRA K 2016-2017 1.Ọ dị ọnụ ahịa na iji eserese ọnlaịnụ na-akwụghị ụgwọ: can nwere ike ibudata maapụ dị iche iche dị n'ịntanetị dị ka maapụ Google, IGO, Sygic na Waze maka n'efu. can nwere ike ịnweta ụzọ ziri...
redio ụgbọ ala dị elu maka MOKKA 2017
Android 9.0 igodo ụgbọ ala maka MOKKA 2017 1.1024 * 600 HD Digital Screen. Ihu Igwe Capacitive ihu ise. 2.car redio maka MOKKA 2017 Nkwado Media Card / GPS Kaadị / 2 USB Stick nchekwa, ruo 4 * 32GB. 3.DIYị Ngosipụta NchNhr: can nwere ike ịdọrọ akara...
Na dash car mult sistemu igwe eji etinye Astra J
Na dash car mult sistemu igwe eji etinye Astra J 1. Nhazi a. Dị ọcha gam akporo os 9.0, 1024 * 600 Capacitive ihuenyo b. PX5 4GB Ram, 32GB ROM ebe nchekwa c. Modulu WiFi wuru na-arụ ọrụ & na-akwado Bluetooth d. Redio NXP6686 + AMP Chip TDA7851...
Ejiji ewu ewu android 9.0 dvd maka corsa
Ejiji ewu ewu android 9.0 dvd maka corsa 1.3D Nsorouzọ: Stereo ụgbọ ala nwere ọrụ igodo ọsọ ọsọ ụwa niile nke ezigbo oke. Site na ọnọdụ dị ugbu a, ọsọ, ihe dịpụrụ adịpụ, ihe ngosipụta ala ụlọ, ngosi 3D n'okporo ụzọ, nchọta ebe na ntụgharị ụda...
Androidgbọ egwu android 9.0 ụgbọ ala Astra K 2016-2017
Androidgbọ egwu android 9.0 ụgbọ ala Astra K 2016-2017 1.Navigation nwere ike inweta ngwa ngwa site na iji ntanetị, ntanetị ma ọ bụ ịzụta kaadị map. Ọ nwere ike na-agba ọsọ ngwa ngwa niile dị ka Google Maps, Waze wdg, ma na-enye ozi ụbọchị ọhụụ na...
Nreta ụgbọ ala 2019 dị elu maka Mokka 2017
Nreta ụgbọ ala 2019 dị elu maka Mokka 2017 1.Hands-Free Calling and Audio Streaming: Ikike ịkwanye Spotify site na ekwentị gị site na Bluetooth iji nwee ọ millionsụ egwu ọtụtụ egwu mgbe ị na-akwọ ụgbọala. smartphone site na eriri USB iji nweta ụfọdụ...
Insigina 2009-2012 android 9.0 audio audio
Insigina 2009-2012 android 9.0 audio audio 1.Perfect Fit maka ụgbọ ala gị Ezubere ngalaba a iji kwado ma jiri ụgbọ ala gị rụọ ọrụ nke ọma. Emere ihe ọ bụla site na imewe na anya ya ka ọ dị mma kacha mma. Ezie na ngwaike na-eme ka otu a jikọọ ma...
Astra J 2011-2012 ụgbọ ala igwefoto dvd ọkpụkpọ ụgbọala
Astra J 2011-2012 ụgbọ ala igwefoto dvd ọkpụkpọ ụgbọala 1, Carplay USB Dongle: Dakọtara na IOS na Astra J 2011-2012 ụgbọ ala multimita dvd ọkpụkpọ gam akporo ekwentị mkpanaaka, Carplay USB dongle a bụ nkwụnye ma kpọọ. Ọ na-akwado njikwa olu olu nke...
Insigina 2009-2012 ụgbọ ihu DVD dvd player ihuenyo mmetụ aka
Insigina 2009-2012 ụgbọ ihu DVD dvd player ihuenyo mmetụ aka 1. Shenzhen Klyde Eletrọniki Co., Ltd hiwere na 2007. Anyị bụ otu n'ime fi 2. Nkọwapụta nke insigina 2009-2012 ụgbọ ala dvd ọkpụkpọ aka ihu : OS: Android 8.0 Sistemụ TFT wakporo IC:...
Ejiji ejiji na stereo ụgbọ ala dash Astra J
Ejiji ejiji na stereo ụgbọ ala dash Astra J 1.LATEST ANDROID 9 OS + AKW HKWỌ KWES :ROW: Wuru na-A53 Octa Core 1.6 GHz CPU, Mali400Mp2 GPU, na Wifi, Bluetooth, GPS modul.Gring a center multimedia center na sistemụ ngagharị dị elu dị n'ụgbọ gị....
stereos ụgbọ ala na ọtụtụ mgbasa ozi maka CORSA 2015-2016
stereos ụgbọ ala na ọtụtụ mgbasa ozi maka CORSA 2015-2016 Otu igwe elektrik nwere igwe eletriki maka CORSA nwere sistemu sistemu gam akporo 9.0, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ audioụ...
onye egwu ụgbọ ala maka MOCCA 2012-2015
onye egwu ụgbọ ala maka MOCCA 2012-2015 Otu igwe ihe igwe egwu nke ugbo ala nke MOCCA nwere sistemu sistemu nke gam akporo 9.0, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS nke di elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ audioụ ọdịyo...
usoro ntụrụndụ ụgbọ ala maka INSIGINA 2014-2015
usoro ntụrụndụ ụgbọ ala maka INSIGINA 2014-2015 Usoro ntụrụndụ ụgbọ ala a maka INSIGINA nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo 9.0, 4 + 32G ebe nchekwa, Octa-core CPU, RDS redio nwere ahaziri elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ maka ọ...
Opel Astra Corsa Zafira gam akporo 9 Headunit GPS
Opel Astra Corsa Zafira gam akporo 9 Headunit GPS Otu a Opel Astra Android 9 Headunit GPS gam akporo Headunit nwere sistemu sistemu gam akporo 9.0, ebe nchekwa 4 + 32G, Octa-core CPU, RDS nke di elu. 4 * 50w akwa ike amplifiers na muti-idozi nke EQ...
AUTORADIO GPS ANDROID maka MOKKA 2017
AUTORADIO GPS ANDROID maka MOKKA 2017 Dị ka otu n'ime ndị na-eweta Android Car DVD emeputa na China, Klyde nwere ezigbo aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Turkey, GCC mba wdg. Lee anyị na-akwado ahịa anyị na-ere ọkụ AUTORADIO GPS ANDROID maka...
ụgbọ ala multimedia gam akporo maka Astra J 2011-2014
ụgbọ ala multimedia gam akporo maka Astra J 2011-2014 Dị ka otu n'ime ndị na-eweta Android Car DVD emeputa na China, Klyde nwere ezigbo aha n'ọtụtụ mba, dị ka Russia, Turkey, GCC mba wdg. Ebe anyị na-akwado anyị na-ere ụgbọ ala na-ere ahịa...
nkeji redio isi ụgbọ ala maka MOKKA 2012-2015
Android 8.0 PX5 radio radio cars maka MOKKA 2012-2015 1. TDA7851 nkwupụta nkwupụta IC, na-akwado nrụpụta ọdịyo subwoofer, ma na-ejikwa ya iche. 2. Nwee obi ike mgbe ị na-atụgharị. Cameras na - atụgharị igwefoto enyere gị aka ịhụ nke ọma ihe...
China Opel Android Car Dvd Ngwa
1. Car audio player / Car Radio dvd maka opel nwere ọnọdụ nke sistemụ na-enyocha ike iku ihe na sistemụ mmanụ, ozugbo achọpụtara site na mmịpụta gafere ọkwa ọkọlọtọ, nyere ịdọ aka ná ntị ozugbo. Mgbe sistemu ahụ kụrụ, oriọna mmehie (MIL) ma ọ bụ nyocha injin (Nyochaa Ngwakọta ọkụ) ọkụ ọkụ na OBD usoro mmejọ ihe omume ga-echekwa ya na ebe nchekwa. Ngwa ọrụ nchọpụta ihe na nyocha ụdị nyocha nwere ike ịgụ ozi dị mkpa na mpempe koodu mmejọ ahụ. Dabere na ngosipụta nke koodu mmejọ, ndị na-ahụ maka ọrụ nwere ike ikpebi ọdịdị na ọnọdụ nke mmejọ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi.
2.The ọsọ nke navi ụgbọ ala maka opel quad isi processor arụmọrụ dị mma nke ukwuu, yabụ na ọkpụkpọ vidiyo, ịdọrọ cursor agaghị abụ. Ma dakọtara ya na ụgbọ ala izizi UBS na AUX maka ụgbọ ala opel ụgbọ ala. Elsdị: Car audio player for opel CORSA 2015 / VECTRA (2005-2008) / ANTARA (2006-2011) / ZAFIRA (2005-2011) / CORSA (2006-2011) / MERIVA (2006-2011) / ASTRA (2004-2009) ) / MOCCA 2012-2015 / INSIGINA 2014-2015 / Astra J2011-2012
Opel Android Car Dvd Opel Android 4.4 Car Dvd Opel gam akporo 5.1 Car Dvd